Sidee qalab cilmi-baaris ayaa kaa caawin kara inaad ku hanto suuqa Amazon?
Haddii aad ku riyooneyso inaad noqoto ganacsade online ah ama aad haysato wax soo saar yar iyo inaad raadisid suuqyada badeecooyinkaaga, Amazon.com wuxuu riyooyinkaaga oo dhan u keeni doonaa runta. Mashruucani waa mid u dhexeeysa ganacsatada internetka ee khibrad leh iyo dadka cusub ee ganacsiga. Uma baahnid maalgelin muhiim ah si aad ganacsigaaga uga bilowdo Amazon. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa hab xeeladaysan, dulqaad, iyo farsamooyinka naqshadaynta ee khibrad badan.
Qodobkani waxaan ka hadli doonaa sida loo aqoonsado suuqyadaa sareeya ee tartanka suuqa kala gedisan oo loola socdo jagooyinka darajooyinka; sida loo soo bandhigo suuqa ugu wanaagsan ee lagu iibiyo; xulashada magnets hogaanka tartanka aad u jilicsan ee suuq-geynta, iyo ugu dambeyntii, ogaado qiimaha qiimaha tartan ee alaabtaada.
Ka hor intaanan ku sii wadi doonin istaraatijiyadaha ugu fiican ee Amazon, waxaa habboon in la yiraahdo Amazon waa nidaam furan oo ka badan f.e. Google. Waxay wadaagaan xogta ku saabsan waxyaabaha ay yihiin Amazon Best sellers iyo taas oo suuqyada suuqa. Waxaad ka hubin kartaa xogtan ku saabsan qeybta Amazon Best Seller. Halkan waxaad ka heli kartaa liis dhamaystiran oo ah Amazon Bestsellers ee niche kasta oo suuqa, waxyaabaha ay yihiin kuwa ugu hibeeysan by dukaamada Amazon, iyo waxyaabaha ay yihiin iibinta ugu. Macluumaadkan qiimaha leh ayaa kaa caawin doona sidii aad u dhisi laheyd ololeyaal ku-ool ah Amazon iyo sidoo kale talooyin waxtar leh. Sidaa aynu u galno.
Sidee loo aqoonsadaa suuqa ugu wanaagsan ama nuuga?
Isticmaal Amazon sida qalabka cilmi-baarista suuqa sida ay ku siin karto xogta ugu saxsan. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad raadsatid iibsadaha ugu wanaagsan ee Amazon oo go'aan ka gaara waxa niche noqon kara si buuxda u dabooli kara baahidaada ganacsigaaga. Macluumaadka iibka ee ugu fiican ayaa kaa caawin kara inaad go'aamiso alaabooyinka ay u badan tahay inay caqabad ku noqdaan suuqa bartilmaameedkaaga iyo inaad keento qadarka ugu wayn ee hogaamin.
Ka dib bogga wax soo saarka, waxaad ka ogaan kartaa meesha uu ku tiirsan yahay iibinta agabka kale ee Amazon.
Waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato qaybaha hoose ee dhinaca bidixda. Qaybahan hoos ku qoran waxay ku siin karaan faham cad oo ah xaaladda suuqa ee hadda jirta. Halkan waxaad ka heli kartaa meelo hoose oo aad ka fiirsan karto in aad hoos u dhigto suuqyadii aad doonaysay.
Waxay noqon kartaa in aysan jirin qaybo hoose oo aad isticmaali karto. Waxay ku xiran tahay suuq-geynta suuqa. Si kastaba ha ahaatee, qaybaha kale ee la xidhiidha ayaa sidoo kale ku siin kara macluumaad aad u fara badan oo ku saabsan xogta sirta ah sida dalabyada suurtagalka ah, hogaaminta magnetka, kor u kaca, hoos u dhaca, iyo wixii la mid ah.
Aqoonsigaaga TOP-ga ee tartanka ku jira oo ka faa'iideysta waxa ay qabanayaan
Alaabada ugu fiican ee iibsadaha Amazon suuqa ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad ogaato tartanka koowaad ee gudaha suuqyadaada suuqa oo barto kuwa haysta alaabooyinka ugu badan ee iibiya. Si aad u hesho macluumaadkan, waxaad u geli kartaa Google iyo gacantaada ku samee bogagga internetka ee tartanka iyo waxyaabaha kale ee alaabada ee ku jira suuqa xorta ah.
Hab kale oo lagu hubiyo tartamayaashaada waa inaad iibsataa mid ka mid ah alaabtooda oo calaamee wixii ay sameeyaan ka dib iibinta. Ma isticmaalaan adeegyadan sida "Genius Feedback" ama kuwo kale si ay u sameeyaan jawaab celin wax ku ool ah boggooda? Intaa waxaa dheer, waxaad eegi kartaa haddii e-mail-koodhka ay ku jiraan waxyaabo dheeraad ah oo suuq-geyn ah ama maahan. Haddii aad hesho qaar ka mid ah qalabka suuq-geynta dheeraadka ah, waxaa laga yaabaa inay xadidan yihiin waxa aad arki lahayd haddii aad iibsatay sheyga-Amazon.
Sidaa darteed, waxaad ku baran kartaa waxyaabo badan oo qiimo leh oo ku saabsan macluumaadka ganacsigaaga kaliya adigoo soo iibsanaya alaabadooda iyo socdaaladooda suuqgeynta Source .